YOMA Bank Home Loan ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သော ရောင်းရန်ရှိသောအိမ်ခြံမြေများ
ရောင်းရန် - down payment သိန်3း60ပေးသွင်းရုံဖြင့် နေထိုင်နိုင်မည့်ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ…
မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Down Payment 360lakhs သာပေးသွင်းနေထိုင်ပြီး ၅နှစ် ၁၀ နှစ် ၁၅နှစ် အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ် လျှင် လစဉ် 19သိန်း ၀န်းကျင်…...
Down Payment 360lakhs သာပေးသွင်းနေထိုင်ပြီး ၅နှစ် ၁၀ နှစ် ၁၅နှစ် အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ် လျှင် လစဉ် 19သိန်း ၀န်းကျင်…
Listed5May 2019
Khin Zar Win
Advertiser : Khin Zar Win
Property ID: S-1171823
Asking Price : 1,200 သိန်း
Mobile : 09952555902
ရောင်းရန် - သွားလာရ လွယ်ကူအဆင်ပြေပြီး နေထိုင်ရန် အထူးကောင်းမွန်သော…
Property ID: S-1171820
ရောင်းရန် - ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ချမ်းသာပလာဇာအနီး အထပ်နိမ့်…
Down Payment သိန်း 390 သာပေးသွင်းနေထိုင်ရင်း အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်သော လစဉ် ပမာဏ ၅နှစ်လျှင် လစဉ် 20.9သိန်း ၀န်းကျင် ၁၀နှစ်လျှင်…...
Down Payment သိန်း 390 သာပေးသွင်းနေထိုင်ရင်း အရစ်ကျပေးသွင်းနိုင်သော လစဉ် ပမာဏ ၅နှစ်လျှင် လစဉ် 20.9သိန်း ၀န်းကျင် ၁၀နှစ်လျှင်…
Property ID: S-1171819
Asking Price : 1,300 သိန်း
ရောင်းရန် - ပုဇွန်တောင်ဈေးအနီး အဆင့်မြင့်မြေညီထပ် မီနီကွန်ဒိုအားသင့်တင့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်…
Down Payment 660lakhs ပေးချေ၍ နေထိုင်နိုင်ပြီး နေထိုင်ရင်း ပေးသွင်း၍၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ်လျှင် လစဉ် 35 သိန်း ၀န်းကျင် 10နှစ်လျှင်…...
Down Payment 660lakhs ပေးချေ၍ နေထိုင်နိုင်ပြီး နေထိုင်ရင်း ပေးသွင်း၍၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ်လျှင် လစဉ် 35 သိန်း ၀န်းကျင် 10နှစ်လျှင်…
Property ID: S-1171818
Asking Price : 2,200 သိန်း
ရောင်းရန် - Down town ၆ မြိူ့ နယ်အတွင်း ပါဝင်သော ပုဇွန်တောင် မြိူ့ နယ်ရှိ…
ပုဇွန်တောင် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ၍ (၃) နှစ်မှ (၁၅) နှစ်ထိ အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သည်။...
ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက် ၍ (၃) နှစ်မှ (၁၅) နှစ်ထိ အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
Property ID: S-1169007
ရောင်းရန် - သာကေတမြို့နယ် ယမုံနာလမ်းမအနီးရှိ တိုက်ခန်းကို အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အလုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မိမိနှစ်သက်ရာ ဘဏ်နှင့်ချတ်ဆက်၍ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ # ရောင်းဈေး သိန်း ၄၂၀ #ကနဦးပေးချေငွေ သိန်း ၁၂၆ #၅ နှစ်…...
မိမိနှစ်သက်ရာ ဘဏ်နှင့်ချတ်ဆက်၍ အရစ်ကျဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ # ရောင်းဈေး သိန်း ၄၂၀ #ကနဦးပေးချေငွေ သိန်း ၁၂၆ #၅ နှစ်…
Property ID: S-1178099
Asking Price : 420 သိန်း
ရောင်းရန် - သွားလာရအဆင်ပြေသော ပြည်တော်အေးလမ်းရှိ နှစ်ထပ်အိမ်ကဲ့သို့ရရှိနိုင်သော…
သင်္ဃန်းကျွန်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၅၀% သာပေးသွင်း၍ ကျန်ငွေအား တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ရင်း ၃၆လ အတိုးမဲ့ အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး…...
ကနဦးပေးသွင်းငွေ ၅၀% သာပေးသွင်း၍ ကျန်ငွေအား တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ရင်း ၃၆လ အတိုးမဲ့ အရစ်ကျဖြင့် ၀ယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး…
Wutt Yee Phoo
Advertiser : Wutt Yee Phoo
Property ID: S-1170179
Asking Price : 690 သိန်း
Mobile : 09-955052552
ရောင်းရန် - အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရရှိနိုင်သော တောင်ဥက္ကလာ ကျိုက္ကစံ ဘုရားအနီးရှိ…
Downpayment 30% or 50% ပေးချေပြီး ကျန်ငွေကို ၃နှစ်အရစ်ကျဖြင့် Company နှင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍လည်း အရစ်ကျဝယ်ယူရရှိန်ိုင်ပါသည်။...
Downpayment 30% or 50% ပေးချေပြီး ကျန်ငွေကို ၃နှစ်အရစ်ကျဖြင့် Company နှင့်တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍လည်း အရစ်ကျဝယ်ယူရရှိန်ိုင်ပါသည်။
Listed4May 2019
Kay Khaing Nyein
Advertiser : Kay Khaing Nyein
Property ID: S-1178093
Asking Price : 770 သိန်း
Mobile : 09-952555908
ရောင်းရန် - ကျိုက္ကစံ ဘုရားအနီး မိဂသီလမ်းကျယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်…
Down Payment 30% - 255 သိန်းပေးသွင်းပြီး ကျန်ငွေက်ို အရစ်ကျဖြင့် နေထိုင်ရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ်အရစ်ကျ သွင်းငွေ - 13.54…...
Down Payment 30% - 255 သိန်းပေးသွင်းပြီး ကျန်ငွေက်ို အရစ်ကျဖြင့် နေထိုင်ရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ၅နှစ်အရစ်ကျ သွင်းငွေ - 13.54…
Property ID: S-1169038
Property ID: S-1169036
Asking Price : 750 သိန်း
ရောင်းရန် - သာကေတမြို့နယ် သုမနလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ မြင်ကွင်းကျယ် အသင့်နေတိုက်ခန်းကျယ်…
သာကေတ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
အခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေချင်သောသူများ ၊ မိသားစုများသောသူများအတွက် အကောင်းဆုံး။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘဏ်နှင့်…...
အခန်းကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနေချင်သောသူများ ၊ မိသားစုများသောသူများအတွက် အကောင်းဆုံး။ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘဏ်နှင့်…
Listed7January 2019
Thae Pwint Phyu
Advertiser : Thae Pwint Phyu
Property ID: S-1178206
Mobile : 09955052551
ရောင်းရန် - တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ် ဘုရားလမ်းအနီးရှိ အသင့်နေတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။
၃၀% ကနဦး ငွေပေးချေ၍ ကျန် ၇၀%ကို ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။...
၃၀% ကနဦး ငွေပေးချေ၍ ကျန် ၇၀%ကို ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Property ID: S-1178237
Asking Price : 980 သိန်း
ရောင်းရန် - BCC ကျပြီးဈေးနှုန်းသင့် အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းကျယ်အားဘဏ်ဖြင့်ချိတ်ဆက်၍…
ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည့် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃, ၀၉၅၀၂၀၆၄၇,...
ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်ယူနိုင်ပါသည့် ၃နှစ်မှ၁၅နှစ်အထိ ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၄၃၀၉၅၁၉၆, ၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃, ၀၉၅၀၂၀၆၄၇,
Advertiser : Nwe Nwe Htun
Property ID: S-1168781
Asking Price : 500 သိန်း
Mobile : 09952555903
ရောင်းရန် - ဈေးနှုန်းသင့် သွားလာရအဆင်ပြေသည့် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း…
Property ID: S-1168782
ရောင်းရန် - ဝေဇယန္တာလမ်းအနီးရှိ သွားလာရေးအချက်ချာကျပြီး ဓာတ်လှေကားပါအသင့်နေအဆင့်မြင့်…
ဘဏ်နှင့်ချိ်တ် ဆက်၍ ၅နှစ်မှ ၁၅နှစ် အထိ် အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။...
ဘဏ်နှင့်ချိ်တ် ဆက်၍ ၅နှစ်မှ ၁၅နှစ် အထိ် အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Advertiser : Shwe Zin
Property ID: S-1168826
Asking Price : 900 သိန်း
Mobile : 09978448672
ရောင်းရန် - ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ကျိုက္ကစံဘုရားတို့အားဖူးမျှော်နိုင်မည့်…
ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ၅နှစ်မှ ၁၅နှစ် အထိ အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။...
ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ၅နှစ်မှ ၁၅နှစ် အထိ အရစ်ကျ ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
Property ID: S-1168825
ရောင်းရန် - အချက်အချာကျပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားအနီး နေထိုင်ရန်ကောင်းမွန်သော…
Property ID: S-1168824
ရောင်းရန် - မြေညီထပ်ခိုးအပြည့်PISM ကျောင်းအနီးmini condo
ကမာရွတ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၉၅၂၅၅၅၉၀၃,၀၉၉၆၁၂၀၈၂၇၈, ၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃ ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ၃ နှစ်မှ ၁၅ နှစ် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်...
ဆက်သွယ်ရန် ၀၉၉၅၂၅၅၅၉၀၃,၀၉၉၆၁၂၀၈၂၇၈, ၀၉၉၇၈၄၄၈၆၇၃ ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ၃ နှစ်မှ ၁၅ နှစ် အတွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်
Advertiser : Hein Thiha
Property ID: S-1172966
Asking Price : 2,300 သိန်း
Mobile : 09953555939
ရောင်းရန် - အခန်းဖွဲစဉ်းမူအပြည့်ဆုံပါဝင်သောminicondo
အခန်သည်းအငှားရှိ , တို့သောအခန်းအငှားကိုဝယ်သူလက်ထဲလက်လွဲမည်. Yoma ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. ဆက်သွယ်ရန်…...
အခန်သည်းအငှားရှိ , တို့သောအခန်းအငှားကိုဝယ်သူလက်ထဲလက်လွဲမည်. Yoma ဘဏ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်. ဆက်သွယ်ရန်…
Property ID: S-1172965
ရောင်းရန် - သာကေတမြို့နယ်ရှိ သုမနလမ်းမကျယ်ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ရန်အထူးကောင်းမွန်သော…
သုမနလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အသင့်နေတိုက်ခန်းကျယ်များအား ကနဦးငွေ ၃၀%ပေးချေ၍ ကျန်၇၀%အား မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘဏ်နှင့်…...
သုမနလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အသင့်နေတိုက်ခန်းကျယ်များအား ကနဦးငွေ ၃၀%ပေးချေ၍ ကျန်၇၀%အား မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာဘဏ်နှင့်…
Listed2January 2019
Property ID: S-1178204
ယခုရုံးချိန်ပြင်ပ/ ရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်နေပါသဖြင့် လူကြီးမင်း၏ နာမည်နှင့် ဖုန်းနံပါတ်တို့ကို သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များထံသို့ ပေးပို့ထားနိုင်ပါသည်။
သက်ဆိုင်ရာ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်များမှ လူကြီးမင်းတို့ထံ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပါမည်။